अष्ट्रेलिया आउनासाथ नेपालीले कस्तो काम पाउँछन् र कति कमाउन सक्छन् ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलिया आउनासाथ नेपालीले कस्तो काम पाउँछन् र कति कमाउन सक्छन् ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २० बैशाख २०७५, बिहीबार ०६:५३ |
नेपालमा जस्तो कुनै पनि हालतमा बेरोजागर भने बस्नु पर्दैन कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै काम भने अवश्य पाइन्छ । क्लिनिङ पछाडि रेष्टुराँमा पनि काम पाउन सकिन्छ । कुकदेखि रेष्टुराँ सहयोगीका रुपमा थुप्रै कामहरु पाइन्छन् । जसमा प्रतिघण्टा १२ देखि १८ डलरसम्म पाइन्छ । त्यसबाहेक असिस्टेन्ट इन नर्सिङ एन आईका रुपमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि निश्चित रकम तिरेर तालिम लिनु पर्छ । तालिम पश्चात काम पाइन्छ । यो काम भनेको बुढाबुढीको हेरचाह गर्ने हो । यस्तो काम पाइएको अवस्थामा प्रतिघण्टा २४ डलरसम्म कमाउन सकिन्छ ।
कस्टम केयर पनि अर्को काम हुन सक्छ । जस्तै विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेष्टुराँ, क्याफेलगायतका काम पाउँन सकिन्छ भने कफी मेकिङ, डेलिभरी, फिलिङ जस्ता काममा पनि नेपालीहरुले रोजगारी पाउँछन् ।
Previousपार्टी एकताबारे ओली–दाहालबीच छलफल हुदै,एकताको मिति घोषणा गर्ने तयारी
Nextयातायातको सिण्डिकेट तोड्ने निर्णय विरूद्द दाङका व्यवसायी अान्दाेलित
रोनाल्डोमाथि लगाइएको बलात्कारको आरोप झुट
२५ आश्विन २०७५, बिहीबार ०१:१३
१४ आश्विन २०७५, आईतवार १३:०५